Mipini yekupedza dutu guru pachiwi chegwenga naRichard Branson - Takaitwa kuSpain
Posted On 9 January, 2019 By HB
Necker Island ndiro zita private pachitsuwa eccentric billionaire Richard Branson, iri Virgin Islands, apo ichi chakaitika wokupedzisira Wednesday Irma Hurricane achiparadza zvose munzira kwayo anazvo. Irma zvinofanira kucherechedzwa kuti dutu iri 5 5 chikamu, ndiyo imwe inoparadza vamiririri zvakasikwa, akanyatsotaura kuti "munwe waMwari" ari chaiwo anoonekwa 90, Twistter.
Pakati pezvimwe zvinhu, Richard Branson ane girasi repasi pevhu paakasarudza kupotera kusvikira Irma apfuura neboka rake. Iye pachake akataura kuti kuvakwa kwaaiva nako pachiwi chake kwakagadzirirwa kurwisana nemiganhu yemiganhu, kunyange kune zvinhu zvishomanana zvinogona kumira mhepo inonzi 5 dutu, naizvozvo vakanga vasingazivi zvachose.
Asi chokwadi ndechekuti winery yakatsungirira, asi kwete yese yechitsuwa, iyo yakaparadzwa. Paakapfuura dutu, Branson akazivisa kuti: "Takapotera kubva kumhepo ine simba ine simba yakange iri mune imwe nzvimbo ye winery, uye, nerufaro, yakaramba yakasimba. Mifungo yedu ndeyeavo vanokonzerwa nedambudziko iri kumativi ose eVirgin Islands, neCaribbean uye kunze kwe "
Pamberi pemupupuriro, Branson akadanidzira kuti sezvo iye neboka rake vaizotizira mune imwe nzvimbo yekuchengetera, zvaive zvingangoita kuti pave nehombodo shomanana yakasara pane iyo inopinda. Uye zvakajairika, waini unogona kuva shamwari yakawanda munguva dzekutambudzika nekupotera kune vanhu vakawanda. Hapana nzira iri nani yekushandisa nguva iyo nzira yakanakisisa ndeyekudzivisa zviri kuitika panze kunze kwebhokisi rewaini, uye, kuziva kuti ndiani cellarZvechokwadi vakanga vasingazove nemiravha yakaoma.
Necker & nzvimbo yose yakaparadzwa zvachose. Pfungwa nemunhu wose anokonzerwa neEpupuri #Irma. Thanks for support https://t.co/0ji8qCZR6K pic.twitter.com/47BDKyrjvK
- Richard Branson (@richardbranson) 7 September we2017
Rwendo rwakapfuura La Rioja, The Ribera del Duero, Bordeaux, Pindai Deux naMereesi kana Tuscany, musoro pfungwa kunakidzwa nechimwe aromas uye zvivako vamwe zvakanakisisa waini munyika ... kuongorora, dzidza uye kuwana unyanzvi rakashandiswa winemakers mukurima kwavo, okunze yacho mugore wokukohwa, waini aipedza nguva kuzorora kusvikira isu kuvhura panguva dutu, uye zvakavanzika avo zvose shure nehomo yewaini.
Akangosangana neusiku hwokudengenyeka kwemhepo uye mvura sezvakaita Hurricane #Irma miganhu inoswedera pedo - munhu wose akadzikama & upbeat https://t.co/tF84SPx7aB pic.twitter.com/lbM0bdHxCv
- Richard Branson (@richardbranson) 6 September we2017
Uye kana aya mawaini ari pamwe chete artisan cheeses o Iberia ham, iwe unogona kutora nguva yekutambudzika mumufaro wakachena. Uye zvose zviri kwatiri, tinogona kuzvipira kutya uye tinopedza usiku hwemhepo inoputika, nemaziso edu akapfigwa uye tichinyengetera, kana isu tinogona kuchinja mamiriro acho ezvinhu uye kutitorera. Isu tinoziva kuti Sir Richard Branson neboka rake vakaita zvakanakisisa zvekugara kwavo ku winery kuburikidza naIrish.
Kutarisira simba rakazara reEngururu #Irma mune maawa anenge 4, tichadzokera kunokrete yevhavha yejeri pasi peimba https://t.co/tF84SPx7aB pic.twitter.com/wMUDoX3O4v
Shingai uye titeverei pamatareji:
Tagged: Bodega/dutu/Virgin Islands/Richard Branson/Waini
Previous mumhanyi; Bodegas Navarro López
Next mumhanyi; Bodegas Pradorey, vakasarudzwa veRibera del Duero